9 -ka ugu sarreeya Shahaadooyinka Wasaaradda Onlaynka ee Bilaashka ah & Shahaadooyinka Seminarka 2022
9 Darajooyinka Wasaaradda ee Bilaashka ah & Darajooyinka Seminary
Halkan, waxaad ka heli doontaa faahfaahinta dhowr shahaado oo bilaash ah oo bilaash ah oo wasaaradda ah iyo shahaadooyin bilaash ah oo seminary ah oo aad uga qayb geli karto eber oo aad hesho saaxiib, bachelor, master, ama shahaadada dhakhtar.
Waad ku mahadsan tahay internetka oo ay ka timid hal-abuurka barashada internetka, waxaad awoodi kartaa inaad wax ku barato wax kasta oo aad rabto internetka. Iyo wax kastoo aad rabto, waxay ka dhigan tahay inaad ka heli karto xirfado iyo shahaadooyin dhab ah khadka tooska ah ee internetka oo sida saxda ah u ah xirfadaha laga helo dugsiga caadiga ah.
Shahaadooyinka wasiirnimada sidoo kale waxaa laga heli karaa online, inkastoo aysan caan ahayn waana sababta dad badani u go'aansadaan inay tagaan umeerin gaar ah haddana waxaa jira kuwo ku filan oo aad ka heli karto mid xiiso leh.
Darajooyinkan waxaa lagu bixiyaa khadka tooska ah ee kulliyadaha Kitaabka Quduuska ah iyo seminaaro loogu talagalay dhammaan ardayda Masiixiyiinta ah ee buuxiya shuruudaha gelitaanka ugu yar ee ay sheegaan dugsiyada martigelinaya.
Kaliya kumaanaan soo koobin shahaadooyinka wasaarada ee khadka tooska ah laakiin kuwa bilaashka ah ee aad kaqeyb qaadan karto oo aad kuheli karto shahaadada lacag la'aan.
Sidoo kale, shahaadooyinka bilaashka ah ee seminary-ka bilaashka ah ee halkan lagu taxay ayaa la mid ah kuwa saxda ah ee kuwa laga soo helo machadyada cilmiga ah ama fiqiga.
Kaqeybgalayaashu waxay sidoo kale kasbadaan aqoonta ugu badan ee meelaha ay xooga saaraan sida ardayga caadiga ah u helo, laakiin kiiskan, waxaa jira faa iidooyin dheeri ah oo loogu talagalay ardayda barta internetka. Faa'iidooyinka waxaa ka mid ah dabacsanaan, sahlanaan, kharash ka jaban ka qaybgalka xiisadaha, iyo inbadan.
Waxaa jira dhowr kulliyadood oo bilaash ah oo bilaash ah oo bilaash ah oo bilaash ah oo ardaydu dhab ahaantii aysan ka warqabin sidaa darteed waa waajibaadkeenna inaan ka soo qaadanno barnaamijyo shahaadooyin bilaash ah iyo koorsooyin kulliyadahaas bible iyo seminaaro oo aan u soo bandhigno ardayda xiiseynaya inay ka qayb qaataan .
In kasta oo shahaadooyinka wasaaradda ee bilaashka ahi ay yar yihiin, waxaan awoodnay inaan la nimaadno kuwa hoose ee aad dalban karto oo aan bilaabi karno isla markiiba waxbarasho.
Dhaqtarka Daraasaadka Baybalka
Dhaqtarka fiqiga ee masiixiga
Dhaqtarka Barashada Diinta
Dhakhtarka Christian Apologetics
Bachelor of fiqi ahaan
Bachelor-ka Wasaaradda Masiixiyiinta
Bachelor-ka Waxbarashada Diinta
Master ee ilaahnimada Masiixiyiinta
Master ee Qadiimiga ah Archaeology
Faa'iidooyinka Darajooyinka Wasaaradda ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah (shahaadooyinka bilaashka ah ee seminary-ka bilaashka ah)
9 Darajooyinka Wasaaradda ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah
(shahaadooyinka jaamacadeed ee bilaashka ah ee waxbarashada)
Hoos waxaa ku qoran liis faahfaahsan oo ah shahaadooyinka wasaaradda ee bilaashka ah waxaan awoodnay inaan u helno ardayda iyo bartayaasha buuxiya shuruudaha gelitaanka aasaasiga ah sida aan si sax ah ugu taxnay.
Barnaamijyadan shahaadada bilaashka ah waxaa ka mid ah shahaadooyinka seminar-ka ee bilaashka ah ee bilaashka ah ee loogu talagalay kuwa ku jira wasaaradda xoola-dhaqatada iyo kuwa doonaya inay ku biiraan wasaaradda xoola-dhaqatada.
Ma dooneysaa inaad hesho shahaadada dhaqtarka ee barashada kitaabiga ah? Marka barnaamijkan adiga ayaa loogu talagalay
The Dhaqtarka Darajada Daraasaadka Baybalka waxaa loogu talagalay in lagu qalabeeyo ardayda aqoonta cilmiga kitaabiga ah iyo cilmiga fiqiga.
Si aad ugu qalanto gelitaanka barnaamijkan, codsadayaashu waa inay lahaadaan MBS (sayidada daraasaadka bible) laga bilaabo seminary fiqiga, ama shahaado kasta oo mastar cilmaaniga ah.
Adiga oo haysta aqoonyahan fiqi ahaaneed oo kasocday dugsi kasta oo seminary ah oo la aqoonsan yahay, waxaad u aadi kartaa Dhakhtarka barnaamijka fiqiga ee diinta iyo boorsada shahaadada ThD dhamaadka barnaamijka.
Dhaqtarka fiqiga ee masiixiga is one of the free theology degree online programs designed for those who want to specialize in Christian Theology or who aim to make biblical theology a part of their ministry.
Sida dhakhtarka barnaamijka fiqiga ee masiixiga ah, barnaamijkani waa mid ka mid ah shahaadooyinka wasaaradda ee bilaashka ah ee loogu talagalay kuwa ujeedadoodu tahay inay u baxaan daraasad aad u qoto dheer iyo ku takhasusida Waxbarashada Masiixiga.
The Dhaqtarka Barashada Diinta barnaamijku sidoo kale wuxuu ku habboon yahay kuwa ujeedkoodu yahay inay ka dhigaan waxbarashada kitaabiga ah iyo tababbarka qayb weyn oo wasaaradda ka mid ah.
Si laguu oggolaado barnaamijkan wasiirnimo waa inaad ku haysataa shahaadada mastarka isla barnaamijkaas.
The Dhaqtarka cudurdaarka waa mid ka mid ah shahaadooyinka wasaaradda ee bilaashka ah ee ku habboon kuwa doonaya inay raaligelinta ka dhigaan mid muhiim u ah wasaaraddooda.
Markaad haysato dhakhtar ku takhasusay arimahan, waxaad si buuxda ugu qalantay xagga shaqada shaqada si aad u wacdiso injiilka ugana gudbiso aqoontaada kuwa kale.
Haddii aad rabto inaad barato barashada aasaasiga ah ee bible iyo fiqiga markaa barnaamijkani waa mid adiga loogu talagalay maadaama ay ardayda u qaaddo barashada qoritaanka qorniinka iyo abaalmarinta a Bachelor of fiqi ahaan kaqeybgalayaasha guuleysta.
Waxay sidoo kale ku habboon tahay kuwa doonaya inay galaan cilmi-baarista fiqiga, qorista, iyo baridda.
Si aad ugu qalanto barnaamijkan, ardayda danaynaysa waa inay dhammeeyeen dugsiga sare ama ay haysteen dugsi ku filan taas oo laga yaabo inay tahay 12 sano oo waxbarasho dugsi sare ah waddamada qaarkood.
Barnaamijkan, ardaydu waxay maraan daraasadaha aasaasiga ah ee raalligelinta, fiqiga, iyo bible oo muhiim u ah lahaanshaha socodsiinta adeegga Masiixiyiinta, ka-qaybgalayaasha guuleysta waxaa la siiyaa a Bachelor of Degree Wasaaradda Christian.
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay ardayda jeclaan laheyd inay galaan xoolo dhaqatada ama waxbarashada-ruuxiga ah / tababarka noocyada wasaaradaha sida wasaaradaha wacdinta caruurta.
Bachelor-ka Waxbarashada Diinta waa mid ka mid ah shahaadooyinka wasaaradda ee bilaashka ah ee bixiya faham aasaasi ah oo ku saabsan fiqiga, baybalka, raaligelinta, iyo aragtida adduunka ee ardayda iyo farshaxanka isgaarsiinta ruuxi ah ee rasmiga ah.
Waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay mid ka mid ah shahaadooyinka ugu fiican ee bilaashka ah ee seminary-ka khadka tooska ah ee hoggaamiyaasha Masiixiyiinta, bachelor-ka waxbarashada diimeed sidoo kale waa shahaado aasaasi u ah kuwa jecel inay u aadaan tacliinta sare ee maadooyinka masiixiga ee aqoonta sare.
Master of Divinity (MDiv) waa mid ka mid ah shahaadooyinka wasaaradda ee bilaashka ah ee ay bixiso Seminary-ka Caalamiga ah ee (Bilaashka ah) Waxbarashada Fogaanta ee Fiqiga.
Barnaamijkan sayidku waa shahaado seminar bilaash ah oo bilaash ah oo ardayda laga siinayo aqoon qoto dheer oo ku saabsan maadooyinka la xiriira wasaaradda kuwa doonaya inay ku takhasusaan wasaaradda.
Si aad ugu qalanto gelitaanka barnaamijkan, musharrixiinta waa inay kasbadeen shahaadada bachelor-ka ee fiqiga oo haddii aad haysato shahaadada koowaad ee bachelor-ka weli waad dalban kartaa.
Kitaabka Quduuska ah iyo qadiimiga ah ayaa badanaa la wada bartaa maadaama ay labaduba muhiim u yihiin raaligelinta masiixiga, daraasadaha kitaabiga ah, iyo fahamka taariikhiga ah ee kitaabka qarniyadii hore.
Iyada oo shahaado ka heleysa barnaamijkan seminary-ka ee bilaashka ah ee seminary-ka wadaadada iyo wacdiyeyaasha, waxaad ku yeelan doontaa aqoon qoto dheer oo ku saabsan bible iyo aqoonta sida fudud ee loogu sharraxo kuwa kale waxaadna heli doontaa Master ee Degree Archaeology Degree markuu si guul ah ku dhammaado barnaamijka.
Kuwani waa shahaadooyinka bilaashka ah ee wasaaradda laga heli karo ee khadka tooska ah ee ardayda danaynaya ay dalban karaan oo ay ku heli karaan shahaadooyinkooda.
Ka Qaybgal Bilaash ah
Barashada Lacagta Bilaashka ah
Tayada Barashada Waqtiga Ku Haboon
Fursad lagu sahaminayo dariiqooyin waxbarasho oo kala duwan
90% Qiima jaban qaadashada Fasalada
Ka hel Shahaadada Caalamiga ah meel kasta oo aad adduunka ka joogto
Shahaadada Masters-ka ee Bilaashka ah ee Sayniska ee Ardayda Caalamiga ah
Koorsooyinka Free Online Jaamacadaha Waxbarashada Yar Xidhiidhka kafaala qaaday Barashada Hagaha Dibadda wax ku barta internetka
shahaadooyinka wasaaradda ee bilaashka ahwaxbarashada bilaashka ah ee seminary-ka internetka
Previous Post:25 Deeq waxbarasho oo aan lahayn shuruudaha IELTS Dibadda
Post Next:20 Kulliyadaha Bulshada ee ugu Jaban USA ee loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah
Manoach wuxuu leeyahay,
May 13, 2022 at 8: 01 pm
Akwaowo wuxuu leeyahay,
Maqaalkani waa mid cajiib ah.. farxad
Pingback: - Adeegyada Waxbarasho ee khadka tooska ah
Pingback: 11 Dariiqo Oo Lagu Helo Shahaadada Dhaqtarka Lacag La'aanta Ah Ee Fiqiga
Siyabonga Mvimbi wuxuu leeyahay,
July 3, 2021 at 9: 22 pm
Hambalyo waxaan kujiraa xiisaha barashada bachelorka ee barashada diinta maxaa yeelay maalin maalmaha kamid ah waxaan rabaa inaan noqdo hogaamiye aqoon uleh kaniisada Fadlan iga caawi inaan gaaro hadafkeyga.
Michael khiyaano wuxuu leeyahay,
June 24, 2021 at 2: 22 pm
Salaan Waxaan haystaa shahaadada fiqiga
Dibloomada .. Iyo fiqiga Bth
Axdi hore iyo sahamin axdi cusub
Waxaan rabaa inaan sameeyo dhaqtarkayga cilmiga diinta
MA SOO HAYSAA KOORSOOYIN Khadka BILAASH AH .. FADLAN TALO
Lucas UT Maswibilili wuxuu leeyahay,
June 28, 2021 at 7: am 11
Waxaan haystaa Dibloomada cilmiga Baybalka waxaanan rabaa inaan wax ku barto Degree
Lucas Maswibilili wuxuu leeyahay,
June 8, 2021 at 8: 04 pm
Waxaan rabaa inaan wax ka barto Shahaadada Bachelor-ka ee Wasaaradda, si naxariis leh ii caawi sidii aan u bilaabi lahaa
June 9, 2021 at 10: 03 pm
Adiga ayaa codsan kara.
Muankang Silvenus wuxuu leeyahay,
June 7, 2021 at 3: 40 pm
Hambalyo waxaan xiiseynayaa shahaadada koowaad ee wasaarada.Fadlan sidee baan ku gaari karaa?
June 9, 2021 at 10: 01 pm
Waraaqaha Dugsiga wuxuu leeyahay,
May 6, 2021 at 4: 13 pm
Tani waa maqaal si fiican u faahfaahsan. Runtii waan jeclahay.
Lana Sawyer wuxuu leeyahay,
May 2, 2021 at 3: 49 pm
Hi, ma haysto nooc kasta oo shahaado ah oo aan ka soo baxay dugsiga sare ee Bahamas. Waxaan ahay rumayste mar kale dhashay oo dareemaya in aanan horumarkan ka samayn safarkan. Mararka qaarkood waxaan baraa barashada Kitaabka Qudduuska ah oo aan baraa Erayga, waxaan dareemayaa in markaan barto koorsada ay iga caawin doonto inaan ku sii riixo safarkan maadaama aanan haysan qof igu caawiya dhiirigelinta.
May 6, 2021 at 7: am 17
Waa salaaman tahay Lana
Xiriirinta arjiga waxaa laga heli karaa kor. Waad sii wadi kartaa inaad codsato.
Noel Hokororo wuxuu leeyahay,
April 16, 2021 at 7: 48 pm
Waxaan xiiseynayaa barashada Bachelor-ka ee shahaadada wasaaradda masiixiga ama Bachelor-ka ee waxbarashada diinta. Fadlan iga caawi sidii aan u gaari lahaa himiladayda / himiladayda.
Mags carnaje wuxuu leeyahay,
April 9, 2021 at 5: am 49
Waad salaaman tahay Waxaan xiiseynayaa inaan ku biiro, daraasaddan internetka ah ee bilaashka ah?
April 28, 2021 at 9: 43 pm
Dr James Arthur wuxuu leeyahay,
March 23, 2021 at 3: 51 pm
Fursadani waxay kor u qaadi doontaa aqoontayda si aan u gaadho heerka Hoggaanka Masiixiyiinta
April 9, 2021 at 5: am 51
Waxaan xiiseynayaa pls. Waxay iga ogolaatay Filibiin, iyo horjooge wasaaradeed oo hadda jira kaniisad yar